Culimada ka soo qayb galaya Mutamarka Minneapolis: August 31,Sept 1,2 2012 – Abuubakar.org
يا بني إركب معنا
Maandhow soo Raac doonta badbaadada
OH my son embark with us
Ilaahay Mahadi ha ka gaadho, waxaa farxad u ah Xarunta Abubakar As-Saddique ee Minneapolis, inay idiin soo gudbiso ogaysiiskii koowaad ee mu’tamarkii sanadlaha ahaa, kiisii 12-aad. Mu’tamarka sanadkan cinwaankiisa guud waa “ Egaarkaygiiyow soo raac doonida badbaadada” oo hadii la fasiro noqonaysta Islaamku waa koobay Manhaj ahaan, dhinackasta oo nolosha ah. Mu’tamarka sandkan ayaa kusoo beegmaya xili aan aheen fasax ah, hawaduna ay wanaagsantahay, sidaa daraadeedna waxaa la filayaa inuu noqdo kii ugu dadka badnaa.
Mu’tamarka sanadkan waa August 31st, Sept 1nd and 2rd 2012, oo ah Jimce, Sabti iyo Axad. Goobta waa Minneapolis Convention Center 1301 2nd Ave South. Minneapolis, MN 55403, sidii caadada inoo ahayd waxaa diyaar ah haynta ilmaha (day care) iyo soo qaadid bilaash ah meelo cayiman, Free transportation (specify area )
Sh Abdibari yahye Al Samarai